MINISITRA RIJASOA JOSOA : Mitety sekoly maro hisorohana ny aretina « coronavirus »
Nidina ifotony nitety sekoly maro teto an-drenivohitra ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika ary ny fanofanana arak’asa, Rijasoa Josoa Andriamanana sy ireo delegasiona notarihiny omaly nanentana sy nampianatra ny mpianatra any an-tsekoly hisoroka ilay aretina « coronavirus » EPP miisa 93 sy CEG ahitana mpianatra an’aliny mahery no nanaovana fanentanana. 19 mars 2020
Fanentanana amin’ny ady atao tsy hiparitahan’ny valanaretina « coronavirus ». Ny mpampianatra sy mpanabe no nofanina teto ary izy ireo indray no asaina mampita izany amin’ny ankohonany sy ny manodidina azy. Paikady vaovao ampiharin’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena io ho fampandraisana anjara ny ankizy sy hitaizana azy ireo ho tompon’andraikitra amin’ny hoaviny.
Tezaina handray andraikitra dieny mbola aty an-tsekoly ny ankizy, hoy ny Minisitra Rijasoa Josoa ary ampianarina azy ireo dieny izao ny fahaiza-mitarika sy fandraisan’andraikitra eo anivon’ny mpiara-belona aminy. « Ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena no manana rantsana mahenika hatrany amin’ny fokontany eran’i Madagasikara ka tsara raha aty no ampitaina ny hafatra. Atoro ny mpianatra ny fomba atao hisorohana ity aretina ity ary izy ireo indray no asaina mampita izany amin’ny manodidina azy », hoy ny Minisitra.
Nanterina sy nampianarina nandritra ity fidinana ifotony ity ireo fihetsika fototra tokony hampiharina hiadiana amin’ny valanaretina « coronavirus », toy ny fanasana tanana amin’ny savony, fanajana ny elanelana iray metatra. Natoro ireo kilonga koa fa tsy azo atao ny mifandray tanàna na dia hifampiarahaba aza, tsy azo atao ny mandrora eny rehetra eny, tapenana amin’ny sandry ny vava sy ny orona raha sendra mievona. Fanombohana ihany ity hetsika ity, hoy ny Minisitra, fa mbola hitohy amin’ny Faritra hafa izany.
Mandray an-tanana amin’ny ady atao amin’ny coronavirus sy mampianatra ny ankizy any am-pianarana ireo fihetsika fototra tokony hatao hiadiana amin’ny valanaretina coronavirus koa ny « Fikambanana Fitia » tarihin’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina. Mizara savony amin’ireo sekoly maro eto an-drenivohitra koa izy ireo mampita hafatra amin’ny mpampianatra sy ny mpianatra tsy hanao kitoatoa amin’ny ady atao amin’ity valanaretina ity satria « lahitokana ny aina ».